Lukaku oo si weyn u ammaanay Zlatan Ibrahimovic kahor kulanka Milan Derby ee Toddobaadka soo socda – Gool FM
(Milano) 04 Feb 2020. Weeraryahanka reer Belgium iyo kooxda Inter Milan ee Romelu Lukaku ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay inuu maalin uun tababarka la qaatay weeraryahanka reer Sweden ee Zlatan Ibrahimovic.
Kooxaha Inter iyo AC Milan ayaa Axada ku wada ciyaari doono garoonka Giuseppe Meazza kulanka loogu magacdaray Milan Derby, kaasoo qeyb ka ah kulamada 23-aad horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga.
Xiddigaha Romelu Lukaku iyo Zlatan Ibrahimovic oo haatan u kala ciyaara kooxaha Inter iyo AC Milan sida ay u kala horreeyaan, ayaa waxay si wada jir ah ugu soo ciyaareen naadiga reer England ee Manchester United.
Haddaba Romelu Lukaku ayaa kahor kulanka Axada ee Milan Derby wuxuu wareysi ku bixiyay shabakada “Sportmediaset” ee dalka Talyaaniga wuxuu kaga hadlay Zlatan Ibrahimovic wuxuuna yiri:
“Zlatan Ibrahimovic waa geesi wanaagsan, aad ayaan u ixtiraamaa isaga, Waxaan awooday inaan tababar kula qaato maalin kasta kooxda Manchester United, taas waxay aheyd wax aad u fiican”.
“Waa ciyaaryahan xirfadle ah iyo shaqsi dabiici ah, weli wuxuu sameeyaa waxa ay tahay inuu sameeyo, wax badan ayuu shaqeeyaa, wuxuuna sameeyaa waxa uu awoodo isagoo 38 sano jir ah”.